Ngwa "Belorechensky" (SSK "Uralsky nduku") - Journal "Nduku System"
Agro-ụlọ ọrụ mmepụta ihe mgbagwoju anya "Belorechensky" (SSK "Uralsky potato")
Na 2017, Uralsky Potato Mkpụrụ reedzụlite inglọ Ọrụ guzobere na mpaghara Sverdlovsk. Ndị sonyere na nhazi ụlọ ọrụ ahụ bụ AO AIC "Belorechensky" na Ural Research Institute of Agriculture. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị ukwuu na Russia maka imepụta na nchoputa nke ọrịa nke mkpụrụ nduku mkpụrụ. Otu ebumnuche kachasị mkpa nke ntọala ya bụ imepụta ebe a na-azụlite ozuzu na mkpụrụ na-eto mkpụrụ nke oge a maka imepụta na ire nke mkpụrụ mkpụrụ nduku dị elu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-ere ahịa kwa afọ nke 10 tọn mkpụrụ osisi mara mma.
Kemgbe 2018, ọrụ ngo Ural anatala ọkwa gọọmentị etiti. A ghọtara ya dị ka ihe dị mkpa iji hụ na nchekwa nri nke mba ahụ ma sonye na mmemme steeti iji kwado nduku Russia na-eto eto.
N'ihe banyere akụrụngwa na akụrụngwa, Uralsky Potato bụ otu n'ime ebe kachasị ọhụrụ. Labolọ nyocha Micropropagation Potato Plant nwere ike ịmepụta ihe karịrị 100 in vitro osisi kwa afọ. Nke a bụ teknụzụ pụrụ iche mgbe microplants toro site na ihe cellular dị ọcha ewepụtara site na akụ nke ụdị nduku dị mma n'okpuru ọnọdụ enweghị mmasị, yana oke ogo nke okpomọkụ, ọkụ na iru mmiri. Otu onye obula banyere uzo di iche iche na ulo oru nke aka anyi iji chọpụta oria nduku site na iji nyocha PCR nke oma na-enye anyi ohere inweta ihe nkpuru kachasi nma.
Complexlọ griin haus, nke nwere 8 griin haus, na-eme ka o kwe omume iwepụta ihe karịrị 560000 nduku minitubers kwa afọ, nke, mgbe oge ụra gasịrị, a kụrụ ha na pru iche pụrụ iche iji nweta ọgbọ mbụ nke tubers. Oge ọ bụla nke mkpụrụ mkpụrụ mbụ na nke amụrụ na Uralsky Potato dị n'okpuru njikwa siri ike nke Rosselkhoztsentr ma soro ya nyocha PCR iji chọpụta maka nje nje na nje nje zoro ezo.
Ruo ugbu a, OOO SSK Uralsky Potato bụ onye nwe ụlọ abụọ na-ekwe nkwa nke nhọrọ Ural: Terra (n'isi ụtụtụ, maka iji okpokoro) na Alaska (etiti oge, maka iji okpokoro eme ihe). Site na 2023, a ga-ere nke ọ bụla n’ime mpịakọta 1000 tọn n’ụdị ndị ọkachamara.
Varietiesdị ndị a gụnyere na mmemme FNTP maka afọ 2017-2025. Site na Iwu nke Gọọmentị nke Russia Federation nke February 15.02.2017, 76 Nke 10, mmepụta nke ụdị ndị isi nke ụdị dị iche iche na-akwado site na mmefu ego gọọmentị etiti. Companylọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị XNUMX na-ekwe nkwa na ụdị ewu ewu dị iche iche, gụnyere Ural, na ozuzu ndị mba ọzọ na ntụpọ dị iche iche iji mee ihe na ọkwa dị iche iche nke ozuzu. N'ime ụdị ụlọ ọrụ ahụ mepụtara, mmadụ nwere ike ịkọba ụdị dị ka Alaska, Terra (nhọrọ nke Ural Research Institute of Agriculture), Gulliver (nhọrọ nke Federal Research Center nke Poteto aha ya bụ AG Lorkh), Samba (nhọrọ nke TatNIISH ), Innovator (nhọrọ HZPC Holland BV) na ndi ozo Thetù a na-arusi oru ike iweputa umu anumanu ulo ma gbasaa ikike ha nwere.
Ndị otu ụlọ ọrụ nwere ezigbo ndị ọkachamara na-eto eto na ọrụ ugbo, gụnyere nna ukwu, postgraduates, ndị na-aga sayensị sayensị. Ndị nwere ume, mmụọ, na-emepe emepe na ndị ọrụ aka mgbe niile.
Tinyere mmepụta, Uralsky Potato, na mmekorita chiri anya na Mahadum Ural Agrarian, na-arụsi ọrụ ike na ngalaba micropropagation, nyocha nke ọrịa na agroengineering teknụzụ maka mmepụta nduku. A na-ebipụta nsonaazụ nyocha na akwụkwọ akụkọ sayensị kachasị.
Ruo afọ atọ nke ọrụ dị irè nke ihe ọkụkụ na-eto mkpụrụ, ọ ga-ekwe omume imezu ebumnuche niile edepụtara maka oge a. Na 2020, n’agbanyeghi onodu agro-onodu ubochi na mgbochi nke metutara oria ojoo a, ndi okacha amara nwere ihe kariri 560000 minitubers, meputa ma debe ton 200 nke nkpuru nke “uzo mbu” na otu nari 1750 -elite "Atiya. Mgbe ọ rụsịrị ike imewe na 2021, ụlọ ọrụ ahụ ga-ewepụta 10000 tọn mkpụrụ nduku mkpụrụ kwa afọ, nke ga-egbo mkpa nke ọ bụghị naanị Ural District, kamakwa mpaghara ndị ọzọ nke mba ahụ.
Tags: "Ural poteto"Ngwa "Belorechensky"mkpụrụ nduku
Ndị ọrụ ugbo na ọrụ ugbo nke mpaghara Sakhalin na-egbute nduku 46,5 puku
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% nke atụmatụ maka ịgha mkpụrụ ọka na mpaghara Nizhny Novgorod